तपाईंको प्रमुख शत्रु को हो ? -प्रिया राना - Nepali Labour Unity
Home विचार/दृष्टिकोण तपाईंको प्रमुख शत्रु को हो ? -प्रिया राना
आज हामी मात्रै होइन सारा विश्व नै आधुनिक युगमा छ। अर्थात हामी २१ औं शताब्दीका मानिस अझ भनौं मानव इतिहासकै सबैभन्दा चेतनशील शताब्दीमा उभिएका सारा विश्वलाई हत्केलामा राखेर हेर्न सक्ने प्रबिधिको युगमा छौ। यो हाम्रो लागी निकै खुसी को कुरा हो तर आजको यो युगमा किन सबैभन्दा बढी समस्या सिर्जना भए त ? किन मानिसहरु डिप्रेसनमा पुग्छ्न्? किन मानिसहरु सुखी र खुसी छैनन्? किन यतिबेला सबैभन्दा धेरै आत्महत्या बढ्दैछ त? यी तमाम प्रश्नहरु हाम्रो अगाडी छन्। तपाईं हाम्रो मनमा खेलिरहेका छन्। आखिर यसको मुख्य कारक तत्व के हो त ? यी तमाम समस्याहरुको सिर्जना कसले गरिरहेको छ त? आज यो बारेमा केहि चर्चा गर्न आवश्यक लाग्यो ।
साच्चिकै भन्नुपर्दा यी माथिका तमाम समस्या अरु कसैले होइन हामी आफैंले सिर्जना गरेका हौ र यसको कारक तत्व पनि अरु कोहि नभएर हामी आफैं नै हौ। मैले यसो भन्दै गर्दा तपाईंहरु अचम्म लाग्न सक्छ किन, कहाँ, कसरी आफै हौ भन्ने प्रश्न तपाईंको मनमा आइसकेको हुनुपर्छ। तर म फेरि पनि भन्छु यि सम्पुर्णको कारक तत्व र सिर्जनाकर्ता हामी नै हौ। हाम्रो प्रमुख दुश्मन हामी आफै हौ अरु कोहि होइन। तपाईंलाई अझ अनौठो लाग्न सक्छ तर अन्तिम सत्य यहि नै हो। यो भन्दा अर्को सत्य छैन किनभने यसका कारण छन्। म ति कारणहरु बारे पनि बताउने नै छु। यसको मुख्य कारक तत्व भनेको के हो भन्दा हामीले आफुलाई स्वीकार गर्न नसक्नु हो भने अर्को कारण भनेको अरुको नक्कल गर्नु हो ।
जब हामी आफुले आफुलाई पहिचान गरेर स्वीकार गर्न सक्दैनौं तब सम्पुर्ण समस्या उत्पादन हुन थाल्छ। अनि आफुलाई स्वीकार गर्न नसके पछि के हुन्छ? अरुको जस्तो नक्कल गर्न थाल्छौ। अनि हाम्रो सम्पुर्ण कुरा यसैमा खत्तम हुन्छ। सुख आत्मशान्ति सबै कुरा अरुको नक्कल गर्दैमा जान्छ। किनभने हामी कोहि पनि अरु कोहि जस्तो हुन सक्दैनौं। हामी आफु हौ, आफु जस्तै रहन सक्नु र यो कुरालाई स्वीकार गर्नु पर्दछ। तब तमाम समस्याहरु क्रमिक रूपमा आफै समाधान उन्मुख हुँदै जानेछ्न्। जस्तो कि एउटा उदाहरण म यहाँ राख्न आवश्यक ठान्दछु। म गरिब परिवारमा जन्म लिन पुगे यो मेरो समस्या हो त? होइन किनकि समस्या त म गरिब छु भनेर सोच्ने अनि अरुलाई धनी देखेर म पनि उनीहरुको जस्तो नक्कल गर्न खोज्नु मेरो सोचाइ, बुझाइ, हेराइ र दृष्टिकोणमा हो ।
मानिस किन डिप्रेशनमा पुग्छ भन्दा उसले आफुलाई स्वीकार गर्न अथवा आफुले आफुलाई modification र Motivation गर्न नसकेपछि तपाईमा सबैभन्दा पहिले असन्तुष्टि पैदा हुन्छ। फलानो यस्तो भयो ढिस्कोनोले यसो गर्यो, अर्कोले त्यो गर्यो हेर्नुस् समस्या तनाव आफैले सिर्जना गर्नु भएन त? किनकि उनिहरु उनिहरु नै हो। तपाईं उनिहरु र उनिहरु तपाईं कहिल्यै कदापि हुन असम्भव छ। किनकि हामी अरुको नक्कल गर्ने मुर्खता गर्नु हुदैन। जब हामी अरुको नक्कल गर्न लाग्छौ तब हामी असफल हुने निश्चित छ। हरेक क्षेत्रमा यो कुरा लागु हुन्छ। कहिल्यै पनि आफुलाई अरुसँग तुलना गर्नु हुदैन नत अरुलाई आफु सगँ नै । तपाईं जाने कतार हो तर तपाईं युरोपेली मुलुक जाने नक्कलमा जब लाग्नु हुन्छ तब तपाईं डिप्रेसनमा पर्नु हुन्छ। फलानो त्यहाँ पुग्यो, फलानो ले यस्तो गर्यो, के तपाईंलाई थाहा छ? फलानोले त्यहाँ पुग्न के गर्यो, कति गर्यो थाहा छैन तसर्थ आफुलाई स्वीकार गर्नु र त्यहीँबाट आफुलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउन सक्नु नै तपाईं सफल र महान बन्नु हो ।
माथिका उल्लेख भएका तमाम विषयहरुले नै हामीलाई बितृप्णा, असन्तुष्टि, लोभ, ईष्र्या, आरिस र दुश्मनीले मात्रै डिप्रेसन हुदै आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुर्याउछ। तसर्थ तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यहीँ सत्य हो। सबैभन्दा पहिलो तपाईंले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। जब तपाईंले आफुलाई स्वीकार गर्नु हुन्छ त्यहाँ तपाईंलाई मिल्दोजुल्दो उपाय र विकल्पहरु मिल्नेछन्। आज विश्वका अधिकांश समस्या अरुको कपि गर्न खोज्नु नै उत्पन्न भएको विश्वमा हिजो स्थापित जो मानिस थिए ति जस्तो कोहि पनि पुन हुन सक्दैनन्। मतलब तपाई तपाई नै हो तपाईं जस्तो अर्को कोहि हुनै सक्दैन नत तपाईं अरु जस्तो नै हुन सक्नुहुनेछ। तसर्थ जहाँ छौ त्यसलाई स्वीकार गरौ। धर्यता र इमानदारी पुर्वक त्यहीँ ठाउँबाट आफुलाई बिस्तारै परिमार्जन गरौ। सबैको कुराको समाधान अवश्य हुनेछ। अरुले के गरेर सफल भए त्यो कहिल्यै नखोज्नुहोस्। अरुले के नगरेर असफल भएनन् यो मात्रै हेर्नुपर्छ। त्यसैले भौतिक समस्या भन्दा बढी हाम्रो मानसिक समस्या छ। मानसिक समस्या हल गर्न मानसिकता को नै विकास गर्नु पर्छ। भौतिक शरीरको अन्त्य तमाम समस्या को समाधान होइन त्यो केवल मुर्खता मात्रै हो ।